ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိစက်, သစ်သီးဖျော်ရည်စက်, နို့စက်, ဘီယာဘီယာ -Goldcheer
ခရမ်းချဉ်သီး Paste ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ခရမ်းချဉ်သီး Paste ကို Re-Pack လိုင်း
tube မြုံခုနှစ်တွင် tube
ရှန်ဟိုင်း Goldcheer Machinery
ရှန်ဟိုင်း Goldcheer Machinery Co. ,, Ltd မှ. စွမ်းဆောင်ရည်အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ယန္တရားတစ်ခုက high-tech ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီခရမ်းချဉ်သီးငါးပိများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမှကျူးလွန်နေသည်, အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖျော်ရည်, လက်ဖက်ရည်သောက်, အသီးအမှုန့်, နို့, ဒိန်ချဉ်, နို့မှုန့်, ဘီယာဘီယာကိရိယာများ.
အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာတပ်ဆင်ထား, အဲဒီလို autoclave အဖြစ်တိကျတဲ့အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တတ်နိုင်ကြသည်, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမြုံနှင့်အေး, ပြွန်မြုံစသည်တို့ကို. GC စက်နားလည်လွယ်အလှည့်-key ကိုဖြေရှင်းချက်ကမ်းလှမ်း, client-side သတ်မှတ်ချက်များတပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ချုပ်.
GC စက်ထိုကဲ့သို့သောတပ်ဆင်ခအဖြစ်န်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်, ကော်မရှင်နှင့်အော်ပရေတာသင်တန်းပေးခြင်း. ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်အမင်းအတွေ့အကြုံရှိနည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအသေးစိတ် troubleshooting ပေးနိုငျ. သင်သည်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး. ကျနော်တို့အလွန်အမင်းတန်ဖိုးကိုဖောက်သည်အကြံပြုချက်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်. ဝန်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်များစုံလင်ဝယ်ယူရှာဖွေတာ၌သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့အသင့်အနေအထားပေါ်မှာ.
မကြာသေးမီက, Goldcheer \_ 's ယိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကတရားဝင်ပြီးစီးခဲ့နှင့်အော့ဖ်လိုင်းခဲ့သည်. ဒါဟာအောင်မြင်စွာဥဇဘက်သို့ပို့ထားပြီး.
2018 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ FoodTec အိန္ဒိယ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ FoodTec အိန္ဒိယအရှေ့တောင်အာရှတွင်အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစားအစာစက်ပစ္စည်းများနှင့်ထုပ်ပိုးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာနိုင်ငံတကာမှာ recogni ဖြစ်ပါသည်
နယူးကိရိယာများ, နည်းပညာသစ်များ, အသစ်ကလုပ်ငန်းစဉ်များ, အသစ်သောအဆင့်မြှင့်တင်
Goldcheer တက်ကြွစွာစျေးကွက်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုး. နယူးကိရိယာများ, နည်းပညာသစ်များနှင့်အသစ်ဖြစ်စဉ်များကိုအလွန် produ တိုးတက်ခဲ့ကြ
© Goldcheer Machinery Co. ,, Ltd မှ. All Rights Reserved 沪 ICP 备 14053300 号 -1